साना उद्योगको प्रवर्द्धनबाट मात्रै आर्थिक विकास सम्भव छः अर्थमन्त्री| Corporate Nepal
साउन १२, २०७८ मंगलबार २२:२७
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनबाट मात्रै आर्थिक विकास सम्भव भएको बताएका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका पदाधिकारीसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले भने, “साना उद्योगको सङ्ख्या कति छ ? अवस्था के छ र समस्या के छ ? बजारको अवस्था के हो ? उत्पादनको अवस्था के छ ? सबै कुराको अध्ययन गरेर के के गर्न सकिन्छ छलफल गरौँ ।” आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन औद्योगीकरण नै मुख्य आधार भएको भन्दै उनले देशभरका साना तथा मझौला उद्योगको व्यापक सञ्जाल बनाउने र तिनकै जगमा ठूला उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्ने नीति तय गर्ने उल्लेख गरे । साना उद्योगको विकासको लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न सकिने भन्दै उहाँले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नै सरकारको प्रयास रहेको बताए ।
मेगा बैंकको मुद्दती तथा बचत खातामा यस्तो छ ब्याजदर, नयाँ बचत खाता योजना पनि सार्वजनिक